I-Bluetooth Payments Ivula Kanjani Imingcele Emisha | Martech Zone
Cishe wonke umuntu uyesaba ukulanda olunye uhlelo lokusebenza njengoba behlala phansi ukuze badle isidlo sakusihlwa endaweni yokudlela.
Njengoba i-Covid-19 ihambisa isidingo soku-oda ngaphandle kokuthinta kanye nezinkokhelo, ukukhathala kohlelo lokusebenza kwaba uphawu lwesibili. Ubuchwepheshe be-Bluetooth busethelwe ukwenza lula lokhu kuthengiselana kwezezimali ngokuvumela izinkokhelo ezingathintwa kumabanga amade, kusebenzise izinhlelo zokusebenza ezikhona ukwenza kanjalo. Ucwaningo lwakamuva luchaze ukuthi ubhubhane lwasheshisa kanjani ukwamukelwa kobuchwepheshe bokukhokha bedijithali.
Abathengi base-US aba-4 kwabayi-10 bashintshele emakhadini angenantambo noma kumawallet eselula njengendlela yabo yokukhokha eyinhloko selokhu kwaqala ukuhlasela kwe-Covid-19.
I-PaymentsSource kanye ne-American Banker
Kodwa ubuchwepheshe be-Bluetooth bulingana kanjani nenqubekelaphambili kobunye ubuchwepheshe bokukhokha ngaphandle kokuthinta njengamakhodi e-QR noma ukuxhumana eduze nendawo (I-NFC)?
Kulula: Ukunika amandla abathengi. Ubulili, imali engenayo, kanye nomphakathi konke kunomthelela ekutheni umthengi uzimisele kangakanani ukusebenzisa ubuchwepheshe bokukhokha ngeselula. Kodwa njengoba wonke umuntu ekwazi ukufinyelela i-Bluetooth, inikeza amathuba athembisayo ezindlela zokukhokha ezihlukene futhi inamandla okufinyelela abantu abahlukahlukene. Nansi indlela i-Bluetooth evula ngayo imingcele emisha yokufakwa kwezezimali.
I-Democratizing Izinkokhelo Zokuthintana
I-Covid-19 yashintsha kakhulu isimo sengqondo sabathengi mayelana nokukhokha ngaphandle kokuthinta njengokuthinta kancane ngokomzimba Emaphoyinti Okuthengisa (pOS) kwaba yisidingo. Futhi akukho ukubuyela emuva - the ukutholwa okusheshisiwe yobuchwepheshe bokukhokha bedijithali ilapha ukuze ihlale.
Ake sithathe isimo kanye ukushoda kwama-microchips osekuvele kuthinte kakhulu ukunikezwa. Kusho amakhadi azonyamalala ngaphambi ukheshi futhi lokho kungaba nomthelela omubi ekufinyeleleni kwabantu kuma-akhawunti asebhange. Ngakho-ke, kunesidingo sangempela sokuthuthukisa izinqubo zokukhokha ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke.
Khona-ke, ngisho nange-cryptocurrency, kune-dichotomy engavamile. Sinenani lemali eligcinwe ngokwedijithali, nokho konke lokhu kushintshaniswa kwe-crypto kanye nezikhwama zemali zisasebenzisa futhi zikhiphe amakhadi. Ubuchwepheshe balolu hlobo lwemali budijithali, ngakho kubonakala kungaqondakali ukuthi ayikho indlela yokwenza izinkokhelo zedijithali. Ingabe izindleko? Ukuphazamiseka? Noma phansi ukungathembani?
Nakuba isikhungo sezezimali sihlala sibheka izindlela zokuphakela izinsiza zomthengisi, azikwazi ukuzitholela amatheminali. Kulapho-ke ezinye izindlela zidingeka khona ukuletha umuzwa omuhle ekuqaleni.
Ubuchwepheshe be-Bluetooth obunikeza abathengisi namakhasimende ukufinyeleleka, ukuguquguquka, kanye nokuzimela ngendlela abakhetha ngayo ukushintshanisa inani omunye nomunye. Noma imuphi umuzwa wokudlela noma wokudayisa ungahlelwa kalula njengoba asikho isidingo sokulanda izinhlelo zokusebenza ezihlukile noma ngisho nokuskena ikhodi ye-QR. Ngokunciphisa ukungqubuzana, lokhu kuzizwisa kuba lula, kufaka phakathi, futhi kufinyeleleke kubo bonke.
Ubiquity Kuzo zonke Izinhlobo Ezihlukene Zamafoni
Uma ubuka izimakethe ezisafufusa kanye nemiphakathi ephansi yenhlalo-mnotho, kuyabonakala ukuthi ngokomlando bekade bengangeni ezikhungweni zezimali zendabuko. Lokhu kungenxa yokuthi ubuchwepheshe be-NFC, obufana ne-Apple Pay, abusekelwa kuwo wonke amadivayisi futhi akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuthenga i-iPhone. Lokhu kukhawulela ukuqhubeka futhi kugodle izici ezithile nezinsizakalo zesigaba esikhethekile esikwazi ukufinyelela kuma-electronics athile.
Ngisho namakhodi e-QR abonakala ekhona yonke indawo adinga ikhamera yekhwalithi ephezulu futhi akuwona wonke ama-handsets afakwe lowo msebenzi. Amakhodi e-QR awasethuli isixazululo esingaka: Amakhasimende kusafanele abe seduze nekhodi ukuze okwenziwayo kwenzeke. Lokhu kungaba ucezu oluphathekayo lwephepha noma ihadiwe elisebenza njengomxhumanisi phakathi kwe-cashier, umthengisi, nomthengi.
Ngakolunye uhlangothi, emashumini amabili eminyaka adlule, i-Bluetooth inikwe amandla kuwo wonke ama-handset, okuhlanganisa namadivayisi asezingeni eliphansi. Futhi ngalokho kuza ithuba lokwenza imisebenzi yezezimali nge-Bluetooth, okuvumela abasebenzisi ukuthi basebenzise ubuchwepheshe obabungafinyeleli ngaphambili. Lokhu kulingana nokunikwa amandla kwabathengi njengoba izingxenyekazi zekhompuyutha zisuswa ngokuphelele futhi okwenziwayo kuhilela i-POS yomthengisi kanye nekhasimende.
I-Bluetooth Iletha Amathuba Engeziwe Kwabesifazane
Amadoda abonisa isithakazelo esikhulu kunabesifazane usebenzisa i-wallet ephathekayo ku-inthanethi kanye nokuthenga esitolo kodwa cishe u-60% wezinqumo zokukhokha zenziwa abantu besifazane. Lapha kulele ukunqanyulwa kanye nethuba elikhulu lokuthi abesifazane babambe amandla obuchwepheshe obusha, obusafufusa.
Ukuklanywa kobuchwepheshe bokukhokha kanye ne-UX kuvame ukuklanywa ngamadoda futhi, ngokubheka ukwakhiwa kwengcebo noma i-cryptocurrency, kusobala ukuthi abesifazane bashiywe ngaphandle. Izinkokhelo ze-Bluetooth zinikeza ukubandakanywa kwabesifazane abanokuhlangenwe nakho okulula, okungashayisani, nokulula kakhudlwana kokukhokha.
NjengoMsunguli wenkundla yobuchwepheshe bezezimali evumela ukuzizwisa kokukhokha okungenamsebenzi, bekubalulekile ukuthi kucatshangwe ngabesifazane ngezinqumo ze-UX, ikakhulukazi ezimakethe ezisafufusa. Siphinde sakubona kubaluleke kakhulu ukuqasha abaphathi besifazane ngokuxhumana namanethiwekhi embonini yokukhokha njenge I-European Women's Payment Network*.
Kule minyaka eyishumi edlule, iphesenti lezivumelwano zebhizinisi eziye zaba abasunguli besifazane cishe Kabili. Futhi ezinye zezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ezitholakalayo ziklanywe abantu besifazane noma zibe nabesifazane ezindimeni zokuphatha izinkokhelo. Cabanga nge-Bumble, Eventbrite, kanye ne-PepTalkHer. Unalokhu engqondweni, abesifazane kufanele futhi babe phambili ekuguqukeni kweBluetooth.
Intuthuko yakamuva nge-Bluetooth ingaxhumana isuka kudivayisi ye-POS yomthengisi, itheminali yehadiwe, noma isofthiwe iye kuhlelo lokusebenza ngokuqondile. Umbono wokuthi uhlelo lokusebenza lwamabhange eselula lungase lusetshenziswe ngokusebenzisa i-Bluetooth, lubhangqwe nemvelo ye-Bluetooth etholakala kuyo yonke indawo, luvulele amathuba labo abavela ebangeni lezizinda zezenhlalo nezomnotho, ubulili, kanye nezohwebo.
*Ukudalula: UMongameli we-EWPN uhlala ebhodini e-Bleu.
Tags: umholo we-apulabluebluetoothizinkokhelo ze-bluetoothukuxhumanaizinkokhelo ezingathintwai-covid-19cryptocurrencyukukhokha kwedijithaliubuchwepheshe bokukhokha bedijithaliizimakethe ezikhulayoInethiwekhi yokukhokha yabesifazane base-Europeubuchwepheshe bezezimalifintechukucubungula inkokhelo yeselulaizinkokhelo zeselulaisikhwama seselulaeduze nokuxhumana kwensimunfcubhubhaneukukhokha inkokheloumthombo wokukhokhaPOSIkhodi ye-QRuxux izinqumo
I-Edgemesh: I-ROI ye-Ecommerce Site Speed ​​njengesevisi